IiAjensi zokuThengisa eDaibha abafuna umsebenzi kwi-UAE 🥇
Faka isicelo kwiAgencies Recruitment Agencies e Dubai?
Umsebenzi eMbindi Mpuma
I-Dubai Jobs Recruitment & Career e Dubai ⭐⭐⭐⭐⭐
Joyina iqela le-Whatsapp kwimisebenzi e-Dubai
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Novemba 5, 2017
IiRejensi zokuBasa e Dubai
Iiarhente zokuqesha kwi dubai ngesi sizathu Inkampani yeSixeko sase Dubai, into enye, kukunceda. Ngokubanzi, sidale i-imeyile epheleleyo kunye noluhlu lweedilesi zeearhente zokuqesha eDubai, iintloko eziseDubai nase-Abu Dhabi kunye iifemu eziphambili zokukhangela eziqeshwe kwiGulf nase Dubai. Kwimeko apho, sizama ukufumana iinkcukacha ezininzi njengokuba sinakho kumqeshi ngamnye eMiddle East ukukunceda ufumane umsebenzi eMbindi Mpuma. I-arhente zokuqeshisa e-Dubai uluhlu Unikezelwe yiNkampani yaseDias City kufuneka ikuncede ukuba ufumane Job Job.
Ngoku sinceda abantu ukuba bafumane abantu kwakhona inombolo kanomyayi ngakumbi imisebenzi online. Singo ngoku uncedisa ukufumana imisebenzi yefowuni yeselula evela eNdiya nasePakistan kunye noMzantsi Afrika kunye nePhilippines. Njengoko kunjalo, ungabhalisa iinkcukacha zakho nenkampani yethu. Uze ufumane oko ukuphupha umsebenzi kwi-Emirate yaseUnited Arabs. Hlakaniza kwaye usebenze kakuhle kwi-CV yakho uze uyithumele kwinkampani yethu.
Ngaphantsi kwezo meko okwangokunceda ukufumana umsebenzi ku-UAE. Ingakumbi kwizikhundla ezahlukeneyo kwi-United Arab Emirates. Ngaphandle kokukhangela iiarhente zokuqesha eDubai. Nawe kufuneka qalisa imisebenzi yokukhangela ekuhambeni nodliwano-ndlebe e Dubai. Ekuhambeni kwexesha, jonga oko inkampani yethu inokukunika yona.
Gcwalisa uluhlu lwee-Agencies e-Dubai
The I-Dubai City Inkampani ivuselele izikhokelo zemisebenzi e-UAE Uluhlu olupheleleyo lwabaqeshi eDubai. Ndiyathemba ukuba uya fumana umsebenzi in UAE. Ingakumbi luluhlu lwethu olupheleleyo lwabaqeshi kwi IUnited Arab Emirates. Lilonke uya kuba nabafowunelwa ngqo. Thumela i-CV yokuqesha abaphathi kwi-Dubai. Enye yeenkampani, kufuneka uqale ujonge kwiinkampani eziqeshwe phezulu. Kwaye sinakho I-Careerjet yokucwaninga iphambili kwaye Eyaziwayo phakathi kwamaNdiya kwirejista yomsebenzi we-Monster. Bafanelekile ukufaka isicelo ngeCV yakho.
Thumela i-CV yakho kwi-arhente yokubasa e-Dubai.
Nceda nqakraza kwi-Icon ukuya kuluhlu olupheleleyo!
Abaqashi abaphezulu kwiDaibha
Iarhente zokuqesha e Dubai
The Dubai City Inkampani yenziwe uphando malunga nokuqesha abaphathi. Kwaye ngoku ngqondweni, sikhethe iikhampani ezigqwesileyo eziqeshisayo eMiddle East. Wena njengomhloli omtsha womsebenzi kufuneka ukhangeleke yintoni umqeshi owona mhle. Ngoko ujonge ukuba yeyiphi i-ejensi yokuqesha iyona nto ibalulekileyo kwi-United Arab Emirates. Ithemba uya kubona umbono ocacileyo wengcali nganye yokuqesha.
Apha ungathumela i-resume yakho kwaye ubhalise!
Igama lomqeshi: Qhagamshelana neCV I-imeyile I-imeyile:
I-Middle East BAC https://www.bacme.com/jobboard/cands/candLogin.asp recruit@bacme.com
URobert Half https://www.roberthalf.ae/submit-cv dubai@roberthalf.ae
Khuthaza u kukhethwa http://www.inspireselection.com/candidate/register.asp info@inspireselection.com
Gulf Recruiter https://gulfrecruiter.com/applicant/registration/ customourercare@gulfrecruiter.com
Ukuqashwa kwehlabathi http://globalrecuae.com/contact_us.php info@globalrecuae.com
URobbert Murray https://www.robbertmurray.com/jobs-classic-view/ info@robbertmurray.com
Iqela leMandla https://www.manpowergroup.ae/en/job-opportunities info@manpower-me.com
Ukuqashwa kweCobalt https://www.cobaltrecruitment.com/candidates/register info@cobaltrecruitment.com
Management Lobo http://www.lobomanagement.com/register.aspx lobo@lobomanagement.com
Umthombo weHr https://hrsource.ae/join-us/ info@hrsource.ae
IKinney ugxeke http://www.kinneyrecruiting.com/register/ jobs@kinneyrecruiting.com
Ukuqashwa kweGoldBeck https://goldbeck.com/jobs-opportunities contact@goldbeck.com
ityuwa https://www.welovesalt.com/uae/jobs/ richard.smith@welovesalt.com
ERandstad https://www.randstad.com/find-a-job/ dubai@randstadmena.com
Accel Hr Ukubonisana http://accel-hrconsulting.com/contact-us/ info@accelhrc.com
IiAjensi zokuThengisa ziyingxenye ye2
MCG neCo http://www.mcgand.co/job-board/ uae@mcgand.co
URussel Reynolds http://www.russellreynolds.com/candidates lauren.taylor@russellreynolds.com
Iqela leMorson https://www.morson.com/online/login enquiries@morson.com
UMdeli https://departer.de/en/vacancies-international/ info@departer.com
Fi kelela iQela http://careers.reachgroup.ae/ INFO@REACHGROUP.AE
IGulf Recruitment Group http://www.thegulfrecruitmentgroup.com/latest_job.php info@thegulfrecruitmentgroup.com
URobert Walters eMpuma ophakathi https://www.robertwalters.ae/account/login-register.html dubai@robertwalters.com
I-MRI yehlabathi jikelele kwi-UAE http://jobs.mrinetwork.com/?sref=MRINetwork%20Website info@mriwwuae.ae
Irestyu yo kuqala http://www.firstresortrecruitment.com/candidates/ cvs@firstresortrecruitment.com
Indwangu http://www.fabricrecruitment.com/Perm-Clients.asp Justin.Kent@fabricrecruitment.com
I-SPphire Recruitment Consultants DMCC http://sapphirerecruitment.ae/candidates/ info@sapphirerecruitment.ae
Ukuqashwa kwehlabathi https://db.grcfair.org/Logon.aspx info@grcfair.org
Expo 2020 https://www.expo2020dubai.com/careers I-imeyile ayinikezelwanga
McDonald Inkampani http://www.macdonaldandcompany.com/candidates lhall@macdonaldandcompany.com
Abc Recruitment http://www.abcrecruitment.ae/browse-by-category imisebenzi@abcrecruitment.ae
IiNkonzo zeNkanyezi ze-UAE http://www.starservicesuae.com/SSCareers/feStarService/Default.aspx info@starservicesuae.com
UCarter Murray https://www.cartermurray.com/users/login info@cartermurray.com
Umthombo wabantu http://www.peoplesource-me.com/services.php resume@peoplesource-me.com
Imisebenzi emithathu https://www.sthreecareers.com/en/contact-us kwi- care-mei@sthree.com
IQela leTywala https://www.cornerstone-group.com/contact/#consultant-search info@cornerstone-group.com
IiAjensi zokuThengisa ziyingxenye ye3
Solution Solution https://jobs.executivesolutionsme.com/en/job-search-results/ info@executivesolutionsme.com
UkuThola iNkqubela https://www.progressiverecruitment.com/job-search prdubaiperm@progressiverecruitment.com
CV yeMasta http://www.maidcv.com/Signup_Pay clients@maidcv.com
Ukuqashwa kweMbr http://mbrrecruitment.com/advertising-and-marketing/send-us-your-cv.php info@mbrworldwide.com
Ulawulo lweTalente http://www.talentdubai.com/jobseeker_page.aspx info@talentdubai.com
ImiSebenzi yeMisebenzi https://www.visage.jobs/diversity.html team@visage.jobs
Qhagamshelana nolawulo oluphezulu http://www.connectexecutivesearch.com/candidates/ info@connectexecutivesearch.com
ukufuna https://www.questsearch.co.uk/job-search/ enquiries@questsearch.co.uk
IKash Global https://kashglobal.com/contact/ info@kashglobal.com
Inkampani yokuThengisa iGreen https://www.greenrecruitmentcompany.com/users/register/new/registration info@greenrecruitmentcompany.com
Iingcali zokuqashwa http://www.expertsrecruitment.com/service.html cv@xpertsjobs.com
Umthi wokuTlola http://www.therecruitmenttree.com/candidates/ info@therecruitmenttree.com
Inkampani yeSixeko sase Dubai https://www.dubaicitycompany.com/upload-resume/ office@dubaicitycompany.com
Isicwangciso sePetroli https://www.petroplan.com/login-register/ dubai@petroplan.com
Iqela le-Alahad http://www.alahadgroup.com/pm_registration/ info@alahadgroup.com
Hays UAE Kunye ne-Arhente yokuThengwa kwe-Middle East
Ngako oko, e Dubai kwiimarike zengqesho abaqashi nabaphathi bezemisebenzi, uHays akafani nanye umqashi kunye nomnikezeli wemisebenzi e-UAE. Ngaphantsi kwezo meko, i-Hays e-UAE yinkampani ekhethekileyo yokuqesha. Apho baphatha khona Imisebenzi e-Dubayi ye-Filip expats. Ekuhambeni kwexesha, inkampani izisa amava abalulekileyo kwiMiddle East ukuba yonke into abafuna umsebenzi bangazuza kuyo. Ukunikezelwa kwezi ngongoma, uHoss unelinye iqela elinomdla kakhulu labaphathi beentloko nabaqashi abaphezulu kwi-UAE. Ukufingqa inkampani isebenzisana kakhulu neYunivesithi yaseMiddlesex e-Dubai.
Qhagamshelana ne-Hays Recruiter Agency kwi-UAE
Eyokuqala indawoI-hays idibanise ividiyo yokunyusa. Kungekudala okanye emva koko Hays kuMbindi Mpuma Uya kunika ingcamango yento efana nokusebenza kwiNgingqi yeSixeko saseDaibha. Ngokukhawuleza ukuba uthumele i-resume kwiqela lezemisebenzi, unokufumana ngokukhawuleza umsebenzi kunye nobomi bomsebenzi kwindawo yokukhangela. Ephakathi kwe Dubai ukuqashwa, inkampani yaseHays ijwayele abafuna umsebenzi behlabathi abavela eNdiya, EPakistan, eYurophu naseMelika
Ngalolu caleni kubhekisela kwinto eyenza inkampani kaHass ibe yinto enhle kummandla weMENA. Ngaphambi kokufumana owona mhle kunabo bonke abaphathi abaphezulu. Hays uhlala ekhangele ngokukhawuleza iitalente ezintsha kwiimarike zamazwe ngamazwe. Ukuze uyibeke enye indlela, kufuneka uzame ukuba yinxalenye yeqela le-Hays e-UAE. Okanye ubandakanyeke ngabo kwaye uqinisekise ukuba uya kufumana kunye nabameli be-Hays abaqeshwayo.
I-HAYS - Ii-arhente zokuqasha e-Dubai
Ifowuni: + 971 (0) 4 559 5800
I-Middle East BAC I-arhente zokuqesha kwi-UAE
Enyanisweni ukuba iBAC EMpuma Mpuma yayaziwa kakuhle kunye nesebe elide kakhulu lokuqesha abaqeqeshi abaphezulu. Ngokuqinisekileyo ngalokhu engqondweni, ukubonisana nokuqashwa kwe-BAC kwi-UAE enye yeyona nkampani ebhetele ukuthumela i-CV. Ubuninzi obunobungqina obunyanzelisayo le nkampani ngumqhubi ophezulu kwiibhasi zokuqeshakukuba i-BAC yasungulwa kwiminyaka emashumi edlulileyo kwaye yayiyi-1979. Ngecala elihle, i-BAC Middle East ibhelele ngokubanzi ngaphambili abaqashi kwiingingqi ze-UAE.
Ukuhluke kwezinye i-industry ye-recruitment BAC ilawula kwakhona izicelo zokusebenza malunga ne-30 iminyaka kwimimandla ye-MENA. Ngelo xesha, inkampani ibe yinkampani yokuqala kwihlabathi eliye laphumelela isitifiketi se-ISO9001 ukususela ekuqaleni kokusebenza. Ngakolunye uhlangothi isandla sineenkcazo zokuqala, ngokwenene, ukuhlakulela ukugxininisa kwimisebenzi e-Dubai kunye kunye ukuhambisa umgangatho ophezulu wokuqashwa kunye nokuneliseka kwabaxhasi kwi-UAE.
I-BAC yee-arhente zokuqeshisa e Dubai
Ifowuni: + 971 (0) 4 439 8500
Amandla aseGroup UYobhi e Dubai
Ubuqili kunye nokuQashwa kweNgqesho
Ngaphezulu kwabo bonke abaqashi be-Dubai City ManpowerGroup ngokukhawuleza kuba yinkokheli yokuqesha e-UAE. Ukuze wenze i-website efanelekileyo yengqesho kwaye uqale inkqubo yokurejista entsha izixazululo zabasebenzi bamazwe ngamazwe. Ngethemba lokuba umntu onamandla ziya kudibanisa amandla abantu kwi 2018-2019 kwabanamandla ishishini.
Amandla aseGroup Ukhonza ngexesha elifanayo kwimibutho emikhulu kunye nemincinci e-United Arab Emirates, Qatar, India, Khanada kunye United States. Njengombandela, le nto yokuqeshwa ngokuqinileyo kuwo onke amacandelo emveliso e-UAE kunye ukwenza umsebenzi eYurophu ePoland. Ukungathethi nto emine imveliso e-UAE. Iminikelo ye nkampani Isevisi yokuqeshisa eliphezulu kwi-Dubai nase-Abu Dhabi nkampani. Ukongezelela, izisombululo ezizinzileyo ziza kuba yingcali kwiimakethe zonyango kunye nokuqesha ngokufanelekileyo.
Apho iWindows PowerGroup isebenza khona
Eyokuqala, iManpowerGroup isebenza kuphela kwihlabathi jikelele. Ngendlela efanayo, indlela inkampani inomnatha weeofisi zokuqesha kumazwe angama-80. Kanye kunye nokuqonda kwehlabathi kunye ulwazi kwiimakethe zokuqesha izithuthi zase-UAE. Kananjalo nangaphezulu kwe-20 iminyaka yobugcisa kwiimarike zengqesho. ManpowerGroup ngaphezu koko iqala ukuba namaqabane e-UAE. Ekukhanyeni kwabafuneki bemisebenzi abazimisele ukukhawuleza imisebenzi yabo ngokubonelela ngokutsha kwiManpowerGroup. Ngaphezu kwe-85% yabantu abafuna umsebenzi baphakamisa umgangatho wabo kubo ukukhangela kwi-UAE.
I-PowerpowerGroup yoqeqesho kwi-career
Ngaloo nto ingqondweni yeQela laseMandla ukunyuka kwemigangatho yemveliso e-Dubai. Ngaphezulu kwayo yonke inkampani iphakanyisiwe ukusebenza kwe35% kwicandelo labaqeshi ekuphumeni kwabo bonke abasebenzi. Ngaphantsi kwezo meko, inkqubo entsha nge-ManpowerGroup ibandakanya ukuqeshwa okulula nokuqeqeshwa koqeqesho kunye MBA kubafunayo abaqeshwe ngokugqiba. Kwinqanaba elingalunganga, inkampani iyayeka ukwenza intuthuko eQatar kwaye kungabikho ukukhula okukhulu kwabasebenzi ababonisana khona. Kodwa kwicala elincinci Abasebenzi basagxotha imisebenzi yezithuba ukuphathwa kwemisebenzi e-Abu Dhabi.
Ifowuni: + 971 (0) 4 391 0460
URobert Half Imisebenzi ye-UAE kunye nokuqashwa e-Dubai nase-Abu Dhabi
Kanjalo omnye wabavakalisi ababalaseleyo e Dubai nase-Abu Dhabi, ukukhomba ukukhangela imisebenzi e Dubai 2018. Kwaye isicelo sezithuba zemisebenzi kwi-UAE. Into yokuqala yokukhumbula wena unokukhawuleza ukukhangela izikhundla ezivulekile e-Abu Dhabi. Ngecala elihle fumana omnye umsebenzi ohambelana nendlela yakho yokuphila. Ngokubanzi uvavanyo lwakho lwezakhono ezizodwa kunye namava eMiddle East ngokubhetele kwi-Abu Dhabi Recruiter. Njengomzekeliso womceli omhle uRobert Half uhlala evula izithuba kwiwebhusayithi yazo kunye neenkampani eziphezulu zeForbes e-Dubai nase-Abu Dhabi. Ekugqibeleni uhlalutyo lwezithuba zemisebenzi noRobert Half balindele ukuba uthathwe.
I-arhente zokuqesha e Dubai - uRobert Half.
Ifowuni: + 971 (0) 4 325 9980
NADIA I-Arhente yokuThengisa e-Dubai
Njengoko kuphawulwe ukuba u-Nadia ukuqashelwa uqhuba iindidi ezininzi kwiindawo zobungcali ngaphakathi kwimarike yengqesho e Dubai, Abu Dhabi, noSharjah. Ngokufutshane, u-Nadia oqeshwe kunye nokuphathwa kweengcebiso Unomsebenzi oshushu kakhulu e-Dubai. Ukushwankathela inkampani kuye kwakha abathengi abathengi kwi-UAE. Ngokuba ngaphezu kweminyaka eyi-30 yama-HR e-Dubai kunye nokukhuphisana kakhulu IArabs iimakethe zendawo. I-Nadia yonke inkampani yakwa-HR inikezela ngenkonzo ephezulu yokuqesha abantu.
Incinci kwinkampani yangasemva yasungulwa kwi-1983. Kuze kube ngoku, oku i-ejensi yokuqesha e Dubai nase-Abu Dhabi khawuleza ube lelona likhulu kunye neliphezulu kwi4.70 ngu Uphando Imisebenzi iphumelele kakhulu Umcebisi wezeLuntu kwiNgingqi yeGulf.
Faka isicelo kwiwebhu: http://nadia-me.com/candidate/index.cfm
Ifowuni: + 971 (0) 4 331 3959
Michael Page Ukuqeshwa kunye neMisebenzi e-Dubai
Ngethemba lokuba uya kufumana Job Job, uchitha ukucinga ukufudukela. Ngale njongo kuwe kunye nosapho lwakho sisigqibo esikhulu. Ungu ehamba e Dubai ngethemba lokuba isigqibo sakho silungile, kungenxa yesi sizathu, ukhethe inkampani enhle. Ngaphantsi kwezo meko, kufuneka wenze isigqibo emva kokuqwalaselwa ngokucokisekileyo kunye nophando iinkampani zokuqesha kwi-UAE.
kuba Imakethi yeJob ye-UAE ayilula kwi-2019. Ngasecaleni elingalunganga ngaphambi kokuba ungene kwindawo entsha ngokucacileyo ubhalise kunye nabaqashi base Dubai. Emva koko zonke izinto eziza kuqwalaselwa ziya kuba kuwe xa uthumela i-resume kwi-UAE abaqashi. Ikhasi likaMichael lihle phakathi Iarhente zokuqesha e Dubai.
UMichael Page kunye ne-Middle East
Ngokuqhelekileyo uthetha uMichael Page zonke iimfuno zokuqashwa zabasebenzi abafuna umsebenzi kwi-UAE. Usebenzisana neenkampani ukuze ufumane iinkcukacha ezifanelekileyo. Ukuqwalasela iinkcukacha, uMichael Page rhoqo kunceda abazingeli bamathuba okuba baphumelele emakethe ekuthengiseni iArabhu. Ukugxininisa icandelo lokuqesha kwinkampani eMbindi Mpuma kuyilelwe ngokulula ulayishe kwakhona Icandelo elinika abantu abafuna umsebenzi a ingqiqo enzulu malunga nokuphila kwabafunayo kwi-UAE.
Ngethuba nje xa ubathumela ukuba baqalise okanye badibane nabo I-WhatsApp ungaqala ukusebenza kuMmandla weMpuma Mpuma. Ngale nto engqondweni, uyazi ukuba ungaya e-Dubai ngemisebenzi. Wonke umntu ofumana umsebenzi we-UAE unokufumana iingcebiso kwi-ishishini yezohwebo kwiSixeko sase-Dubai. Kubandakanya indawo yokuhlala yokuhlala kwi-UAE, amaziko kunye nolwazi oluncedo kwimisebenzi yokukhuthaza e-Dubai, izikolo kunye lonwabo kubantwana bakho, indlela yokuvula i-akhawunti yebhanki kuyo Dubai kunye nekhowudi elula yokuhlala e-UAE.
Ifowuni: + 971 (0) 4 709 0300
Adecco EMbindi Mpuma
Kule meko, iNkampani yaseDaily City iveza ukuqashwa okuphezulu kunye ne-agarho yengqesho kwiGCC. Ngaphambi kweenkokheli zehlabathi kunye Iinkonzo ze-HR kunye neengqesho eMbindi Mpuma. Ngaphantsi kwe-Adecco brand ukukhangela umsebenzi izisombululo, abaviwa abafumana uncedo lomsebenzi wabo wehlabathi. Ukuza kuthi ga ngoku, kungaphezu kwe14,000,000 ebhalisiweyo abaviwa abaguqula ubomi babo kwi-UAE.
Oko-u njengoko ujonge ukuphakamisa umsebenzi wakho e Dubai ngaphandle kokulibaziseka kufuneka uqhagamshelane nabaphathi be-HR kwi-Adecco nkampani. Ngexesha elide inkampani iqeshisa i-Hospitality Careers abazingeli bemisebenzi bangafikelela kwizithuba zengqesho zabasebenzi basePakistan ithunyelwe kwi-site yomsebenzi we-Adecco. Le nkampani yilezi nkampani ezithembekileyo zokuqasha e-Dubai, akukho mibuzo eceliwe. Ngokuba ngenjongo yokufuna umsebenzi le nkampani ikunika unokutshintsha ihlabathi lakho. Ngenxa yesi sizathu kunye no-Adecco, unokuphucula indlela abantu abaqesha ngayo i-UAE. Adecco enye okulungileyo phakathi kwee-arhente zokuqasha eMumbai.
Iinkonzo ze-Adecco kwi-United Arab Emirates
Njengokuba kunjalo, u-Adecco unikeza iintlobo ezininzi zokuqesha iinkonzo kwiYurophu, eKatar, e-US, eCanada, Asia. Ngalo njongo u-Adecco ukudibanisa abazingeli bemisebenzi kunye nabaqashi. Ukungakhankanyi ngaphezu kwabafunayo be-650,000 abayithumelayo baphinda baphinda baqalise abaqeshwe kubaxhasi imihla ngemihla. Ukongeza kwiinkonzo zokuqashwa ezinikezelwa yiinkampani ze-Adecco ziqela ezininzi kubasebenzi apho unokufumana khona Jobs Dubai. Ukungathethi ezinye iinkonzo ezifana nokubekwa ngokusisigxina e-Dubai, ukuguquka kwemisebenzi esuka eNdiya nasePakistan ukuya eUAE. Ngaphezu koko, phucula uphuhliso lweetalente ngaphakathi kwindlu. Emva koko, inkampani i-No.1 kunye nabagqatswa abaphuma ngaphandle baseYurophu kunye Ukuqhagamshelana nomsebenzi eSaudi Arabia kunye ne-UAE.
Imisebenzi yeoli neGesi e Dubai.
Izithuba zengqesho zobunjineli.
Umqhubi kunye nemisebenzi ye-Uber e Dubai.
Umsebenzi we-IT & Telecom e-UAE.
I-FMCG neZithuba zokuThengisa e-Abu Dhabi.
Imali kunye nezikhundla zoVavanyo kwiQatar.
Ifowuni: + 971 (0) 4 368 7900
URobbert Murray Ubungcali beJob kwi-International Job Seekers
URobbert Murray I-Agent Recruitment Agency e-UAE. Akunye kuphela iinqununu ezilungileyo kwiDaibha kodwa kunye nenkampani enokufuna ukufumana italente. URobbert Murray ngenjongo yenkampani eyaziwayo yokuqeshisa umsebenzi uye wakwazi ukuphakama ekuqeshweni ngamazwe ngamazwe. Ukuyibeka ngenye indlela, umqeshi uye wasungula le webhsayithi yomsebenzi wase-Dubai ubukhulu obunxweme shishini. Ngokuqhelekileyo, inkampani eyona nto iphambili kukunceda bakhulise abaviwa abatsha kwi-UAE.
Ekugqibeleni, uRobbert Murray ungomnye wabasebenzi abahamba phambili iinkampani e-UAE omele ubhalise kunye. Ekuhambeni kwexesha, ukuba wena ukudibanisa nalo mqeshi uya kushaya amanqaku aphezulu ngaphakathi iinkampani ezininzi kwi-Dubai kunye neLondon. Ukufikelela esiphelweni sokuba kuyo nayiphi na imeko izithuba zomsebenzi yi-Qatar, ISaudi Arabia, E-United Kingdom okanye kwihlabathi liphela bathumela i-CV kuRobbert Murray.
Umsebenzi weRobbert Murray kwi-expertise yase Dubai
Ukunikezelwa kwezi ngongoma, iqumrhu liye laqulunqa u-Linkedin olunzulu Uthungelwano lwe-HR kwinethiwekhi yase-Middle East. Ngokwenene, zizonke zihlala kwimimandla eyahlukileyo kwihlabathi lonke ukuze uvulekele uhambo lwehlabathi jikelele. Kufuneka ukhunjulwe ukuba ubuchule bokuqeshwa kwelo nkampani kubangele Isikhundla esigqibeleleyo sokunceda abazingeli bezemisebenzi badibanise kunye. Kwinqanaba elincinci elifanelekileyo le-headhunter E-Dubaï kunceda abanye abaqeqeshi ukuba bahlangabezane neemfuno zabo baze bafakwe kwi-UAE.
Njengoko kunjalo, oku Indawo yomsebenzi inceda ukunceda umfazi ngokuxhuma kwi-Dubai. Kwaye nabaviwa abafanelekileyo kakhulu kwaye benze izabelo ezikhethekileyo kwiinkampani ezininzi eziseMiddle East. Ekugqibeleni ukuba isebenzi likaRobbert Murray emsebenzini e Dubai liqesha ukusuka kwi-1995 kwaye lifanelekileyo uxanduva kwiimfuno zenkampani e-Dubai City.
Ifowuni: + 971 (0) 4 381 7473
Khuthaza u kukhethwa Umqashi oLawulayo e Dubai, e-UAE
Nangona oku kunokwenene okukhethiweyo kuyinto ekhangele phambili iwebhusayithi yokuqashwa kunye ne-ejensi yengqesho e Dubai. Ngakolunye uhlangothi ngenjongo yokuBasela. I-Inspire Selection Agency kwi-UAE inceda ngaphezu kwe-3,000,000 abaviwa bokuthengisa ukufumana imisebenzi kwi-UAE. Ngethemba lokuba abanye abaviwa baya kufumana imisebenzi eninzi kunceda kunye namathuba omsebenzi kuloo ndawo yomsebenzi e-Dubai. Ngenxa yoshishino lokuqesha eMbindi-mpuma, akulula ukuba songeze oku UAE port portal ukunceda abafuna umsebenzi wase-Dubai bafumane umsebenzi ngokukhawuleza.
I-arhente zokuqeshisa e Dubai - Inspire Selection.
Ifowuni: + 971 (0) 4 368 0852
ERandstad Ukuqeshwa kunye neeNkonzo ze-HR kuMbindi Mpuma
Iarhente zokuqesha e Dubai Ukuze ube yinkampani efanelekileyo yokuqesha eMENA. Randstad iya kunyuka phezu kwee-arhente zokubasa i-UAE. Ngenxa yoko, inkampani yenziwe i-website engcono kakhulu yokufuna umsebenzi kwi-Indiya emhlabeni. Kwinqanaba elihle lokufumana umsebenzi kwiRandstad, kulula kakhulu. Izaziso ezihlaziyiweyo ngokukhawuleza abacebisi bezakhono zokuqesha.
Vumela abaviwa emsebenzini eM Dubai bayisebenzise ekusebenziseni umsebenzi eMiddle East. Enye ingongoma ephambili kunye neRandstad ukuba ufuna ukuba ngumqeshi. Ukuthetha jikelele, inkampani enika umsebenzi ovuzayo kuRhulumente ishishini lokuqesha elingekho nje e-United Arab Emirates. Shwa nkathela unokuthatha ulawulo lomsebenzi wakho wobugcisa. Ngaphandle kweemarike zomsebenzi wamazwe ngamazwe kwaye ufake isicelo sommeli we-recruiter kwinkampani yaseRandstad HR.
Malunga neRandstad Mena Recruitment
Kwimeko nayiphi na imeko, uRandstad MENA uyaziwa kunye Igosa lokuqeshisa e Dubai. Kwaye enye yeyona nkampani ebhetele kwi-UAE. Ekugqibeleni, abaninzi abantu bayazi ukuba iRandstad Holding yi-$ 28.3 yebhilidi yebhilidi. Ngokukhawuleza inkampani idale iinkonzo ezilungileyo ze-HR kwiminyaka elishumis. Kuze kube ngoku iRandstad ekhuphuka kunye Indlela ekhethekileyo yabameli baseMzantsi Afrika e-Dubai City. Ukuqala, izisombululo zoshishino eziphambili kunye nobuchule bomntu uRandstad yiyona nto ibhetele ukuqashwa kwamashishini kubasebenzi bamazwe ngamazwe. Kungekudala uza kubona a Inkampani yaseRandstad kwi-intanethi. Ngeli xesha, ungaqala imisebenzi kwangaphambili ngaphandle kokulibazisa ukuba ungomnye wabagqatswa kunye nabaphathi bamashishini e-United Arab Emirates.
ANOC Uphando lweSixeko soLawulo lweSixeko sase Dubai
Yonke inkampani yokulawulwa kwe-ANOC ngokukhawuleza ayikho nje into elula yokuqesha. Injongo yenkampani ekugqibeleni inokuthi ukudala ixabiso lomsebenzi wamazwe ngamazwe abafuna umsebenzi. I-ANOC inamasebe e4 eDubai apho unokuthi ufike khona kwaye ungakha imisebenzi okungenani yokuthetha ubuso ngobuso kunye abameli bokuqesha. Ukuqala ngalo mqeshi umangalisayo nceda ubhalise kwi-Intanethi okanye utsalele umnxeba kwi-ANOC.
Ekubeni uthumela ngokuphinda uqale ngomzuzwana umcebisi wezolawulo uza kujonga kwakhona yakho. Ekugqibeleni, unganciphisa ixesha lokusebenza kwakho nzima ngokubonisa i talente yakho neziqinisekiso zeziko le-ANOC. Ngaphambili inkampani elawula umsebenzi omhle wabazingeli bomhlaba jikelele apho bangasebenzisa khona iqonga ukuze badibanise nabaxhamli abazayo kwi-Dubai nase-Abu Dhabi. Le ndawo yomsebenzi yenye yeendawo ezifanelekileyo zokuqashelwa e-Dubai.
Jerry Varghese ImiSebenzi yamazwe ngamazwe
UJerry Varghese ImiSebenzi yamazwe ngamazwe Isisombululo sabasebenzi behlabathi abafuna umsebenzi. Jonga aphuma eNdiya awanceda abantu ukuba bafumane umsebenzi.
Imisebenzi e Dubai kunye neJerry Varghese IiNkonzo zaMazwe ngamazwe. Le nkampani yenye yeyona nto ibhetele phakathi kwabaqashi. Njengokuba ngenyaniso, Jerry Varghese liqela elikhokelayo ekufumaneni abasebenzi ngaphakathi kwezisombululo zobuchule bokugaya abasebenzi zokuthengisa. Idityaniswe nezikhundla eziphezulu zomsebenzi. UJerry Varghese ungoyena wabacebisi abaphambili nabaphezulu. Kwelinye icala, i inkampani inikeza iinkonzo ezibandakanyekayo kunye nokuqeshisa ngokupheleleyo kwiGulf.
Ngexesha elifanayo xa usebenzisa iiJerry Varghese IiNkonzo zamazwe ngamazwe. Ngokuqinisekileyo, banikezela ngexabiso ukufakwa kwi-Dubai shishini. Elinye inqaku eliphambili onokusebenzela kulo ngumzi-mveliso kwaye imisebenzi yaseburhulumenteni. Into yokuqala yokukhumbula loo nkampani ukuba nobukho obuqinileyo eMbindi Mpuma kwaye basebenza iminyaka engaphezulu kwe-30. Kwimeko elungileyo xa wenza umsebenzi wokukhangela le nkampani yokuqesha. Unokulindela iinkonzo zamanye amazwe kunye nabasebenzi. Hhayi nje kwiinkampani zeGulf kodwa nakwihlabathi lonke.
Kwiminyaka yokugqibela ye-25, uJerry Varghese uye wanceda abafuna umsebenzi. Ukuthetha jikelele evela kwihlabathi lonke kwaye iquka iNdiya nePakistan. Ubuninzi obunobungqina bokuthi inkampani yenye yeyona nto ibhetele. Ngaba ukuqeshwa kwabo kubakho emhlabeni jikelele ubugcisa bemakethe eMbindi Mpuma.
Ngenxa yoko, sizama ukuzisa inkampani kuwe. Njengoko kuboniswe ngentla nkcazo yekhampani yemakethi yokuqesha. Nasiphi na isiganeko, ukufuna umsebenzi kukukhetha okuhle. Nonke umkhangeli omtsha ojongene neengxaki ngokufuna uphando kunye nobomi kwi-GCC.
Inkampani yeSixeko sase Dubai Imisebenzi e-Dubai Servicesing Services
Okwangoku, kufuneka sikhuthaze inkampani yethu. Ngaphandle kokulibaziseka, unokufumana umsebenzi e-Dubai. Ngeli xesha, kufuneka ulayishe i-resume kwi-database yethu. Ukususela kwi-2016 kwi-350,000 yokuphanda umsebenzi kunye nabaviwa emva kweenkcukacha zethu zentlalo. Ngenjongo yokubeka abaviwa kwi-Dubai, senze ngokuqinisekileyo enye ye iinkqubo ezithengisayo zokufumana umsebenzi e-Dubai.
Ukubeka enye indlela, abacebisi bethu abaqeshwe yiingcali kwi- Ukufakwa ngokuphumelelayo kweMisebenzi e-Dubai. Sisoloko sifanele siqiniseke ukuba abaviwa bethu baba ngabasebenzi kwisigxina, isigxina, ixesha elizeleyo okanye ixeshana kwii-Oil & Gas, Marketing and Sales, Ukuqeshwa kweehotele e Dubai, EzeMpilo, iAkhawunti, Iibhanki kunye nezeMali, iiNkonzo zobunjineli kunye nokuThengisa eMbindi Mpuma.
I-Arhente engcono kakhulu yokuBasela e Dubai
Ngenjongo Iimfuno zokufumana izicelo zebhanki e-Dubai. Inkampani yethu ihluke kwabanye. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kunye nenkampani onokufumana umsebenzi kwi-UAE 5x ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nakwezinye iinkampani. Uya kufuneka uhlawule i-$ 5 kuphela yokubhalisa. Kodwa ngenxa yokwesaba ukuba uya kulahlekelwa yimali sinika i-100% yokubuyisela imali. Ngoku okanye mva Ukuba usebenzisa inkonzo yethu yokufuna umsebenzi uya kufumana umsebenzi e-Dubai. Kuze kube ngoku, sibeke phezu kwe80,000 abafuna umsebenzi kwi-UAE. Ekugqibeleni, sibheke ukubeka i-20,000 elandelayo kwi-2018.
Ifowuni: + 48 (0) 536 003 117
Inkampani yeSixeko sase Dubai ngoku kunika izikhokelo ezifanelekileyo zeMisebenzi e-Dubai. Iqela lethu ligqibe ekubeni longe ulwazi ngolwimi ngalunye Dubai idlulisa. Ke, unale nto engqondweni, ngoku unokufumana guidesIingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolwimi lwakho.
ImiSebenzi ngeAetna International
U-LinkedIn u-Sohaib Hasan